China L-Tryptophan CAS 73-22-3 yePharma Giredhi (USP) vagadziri uye vanotengesa | Honray
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Tryptophan
Chitarisiko: Chena kune zvishoma yero makristasi kana crystalline upfu
Product Properties: Odorless, zvishoma kuvava. Zvishoma zvinonyungudika mumvura, zvishoma mune ethanol uye zvisingasviki mu chloroform, asi inogadziriswa mune sodium hydroxide solution kana kusanganisa hydrochloric acid, uye nyore nyore kusungunuka mu formic acid. Wana mavara kamwe wakaratidzwa muchiedza munguva yakareba.
Chigadzirwa Chigadzirwa :: L-Tryptophan
L-Tryptophan (Yakapfupikiswa Edza) ndeimwe yemunhu uye mhuka yakakosha amino acids. Asi haigone kugadzirwa nemuviri.
Kufanana nemamwe amino acids, L-Tryptophan ndechimwe chezvivakwa zveprotein. Asi kusiyana nemamwe amino acids, L-Tryptophan inoonekwa yakakosha nekuti muviri haugone kugadzira wega. L-Tryptophan inotamba akawanda mabasa mumhuka nevanhu zvakafanana. Asi pamwe zvakanyanya kukosha, chinhu chinotungamira chakakosha kune akati wandei maurotransmitter muuropi. Sezvo zvakadaro, L-Tryptophan ndiyo chete chinhu chinowanzo kuwanikwa mukudya icho chinogona kushandurwa kuita serotonin. Sezvo serotonin inoshandurwa muuropi kuita melatonin, L-Tryptophan anoita mutsindo zvakajeka mukuenzanisa mafungiro uye maitiro ekurara.
Inoshandiswa sekuwedzera kwekudya uye antioxidant.
1. Inoshandiswa mukudya kwemhuka kunatsiridza kudya kwemhuka, kudzikisira kushushikana, kugadzirisa kurara kwemhuka.
2. Inoshandiswa mukudya kwemhuka kuwedzera antibody yemucheche nemhuka diki.
3. Inoshandiswa mune chikafu chemhuka kugadzirisa mukaka kuchengetedza mombe dzemukaka.
4. Inoshandiswa mune chikafu chemhuka kudzikisa huwandu hwakawanda hweprotein ration uye chengetedza mutengo wekudya.
Sekuwedzera kwekudya, L-tryptophan kugadzira amino acid infusions uye yakazara amino acid gadziriro pamwe chete nemamwe akakosha amino acids.
L-tryptophan inogadzirwa ne microbial Fermentation iyo iyo glucose, yeast mbiriso, ammonium sulphate inoshandiswa sezvinhu zvakasvibirira uye inogadziridzwa ne membrane kusefa, ion kuchinjana, crystallization uye kuomesa maitiro.
Munhu akaidza (pakaoma hwaro) 98.5% ~ 101.5%
PH Kukosha 5.5 ~ 7.0
Chaicho kutenderera -29.4 ° ~ -32.8 °
Iron (saF) ≤0.003%
Heavy simbi (sePb) ≤0.0015%
Kurasikirwa pakuoma ≤0.3%
Residue pamusoro kuvesa ≤0.1%
Pashure: Glycine CAS 56-40-6 yeChechi Chikafu (FCC / AJI)
Zvadaro: L-valine CAS 72-18-4 Ye Chikafu Giredhi (AJI USP)
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm Giredhi, Kudya Kwemhuka, Pharm Giredhi L-Leucine, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, 73-32-5 L-Isoleucine,